ကိုယ်ခန္ဓာ တောင့်တင်းလှပစေဖို့ ဘယ်လောက်ကြာကြာ လေ့ကျင့်ရမလဲ – Gentleman Magazine
ကိုယ်ခန္ဓာ တောင့်တင်းလှပစေဖို့ ဘယ်လောက်ကြာကြာ လေ့ကျင့်ရမလဲ
လေ့ကျင့်ခန်း ဘယ်လောက်များများ လုပ်သင့်ပါသလဲ?? လူတော်တော်တော်များများဟာ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ အချိန်ကို ဝေခွဲမရတတ်ပါဘူး။ တစ်ပါတ်ငါးရက်လား? လေးရက်လုပ်ရမှာလား?? နှစ်ရက်ဆို လုံလောက်ပြီလား??
ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ကာယ ပညာရှင်တစ်ယောက်ကို မေးကြည့်ပါတယ်။ သူပြောတာက တစ်ပါတ်မှာ နှစ်ရက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာနဲ့ သုံးရက်လုပ်တာနဲ့က တော်တော်ကွာပါတယ် တဲ့။ ဘာမှမလုပ်တာထက် လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုလုပ်တာက ပိုကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် သင်က အစကတည်းက ကိုယ်လုံးလှနေပြီးသားလူတစ်ယောက်ဆိုရင် တစ်ပါတ်ကို နှစ်ရက်ပဲ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာကက အရမ်းအကျိုးမဖြစ်ထွန်းစေပါဘူး။
တစ်ပါတ်မှာ သုံးရက်လောက်အနည်းဆုံးတော့ သေသေချာချာဆွဲထားတဲ့ လေ့ကျင့်မှု အစီအစဉ်နဲ့ လုပ်ရပါမယ်။ ပြောရရင်တော့ ကိုယ်ကာယ လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုခုကိုတော့ နေတိုင်းလုပ်ပေးသင်ပါတယ်။ ဥပမာ လမ်းလျှောက်တာ၊ ပြေးတာပေါ့။ လေ့ကျင့်ခန်းနားရက်တွေမှာ ဘာမှမလုပ်ပဲ ထိုင်နေခဲ့ရင် အရင်ရက်တွေက သင်တို့ ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ထားတာတွေအားလုံး သင်ပုန်းကျေသွားပါလိမ့်မယ်။
တစ်နေ့ကို တစ်နာရီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး ကျန်တဲ့ အချိန်တွေ လုံးဝ အညောင်းထိုင်နေမယ်ဆိုရင် ကျန်မာရေးဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချိန်တွေမှာသာမက တခြားအချိန်တွေမှာလဲ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား နေပေးသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ ပြောရရင်တော့ တစ်ပါတ်ကို နှစ်ရက်လုပ်တာနဲ့ သုံးရက်လုပ်တာက အများကြီးကွာပါတယ်။ တစ်ပါတ်ကိုသုံးရက်လုပ်ရင် အပြောင်းအလဲတွေကို စောစောစီးစီး မြင်ရမှာပါ။ သုံးရက်ထက် ပိုလုပ်ချင်ရင်လည်း ရပါတယ်။ တစ်ပါတ်နှစ်ရက်ကတော့ အဲ့လောက် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလဲ သိသိသာသာ ခံစားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အရမ်းပင်ပန်းတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေဆိုရင်တော့ တစ်ပါတ်ကို နှစ်ကြိမ်မှ ငါးကြိမ်အတွင်း သင့်ခံနိုင်ရည်အားအပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ခံနိုင်လာပြီး တိုးတိုးပြီး လုပ်နိုင်လာမှာပါ။ ကလေးတွေနဲ့ လူငယ်တွေ လေ့ကျင့်ခန်း စလုပ်တာဆိုရင်တော့ နှစ်ရက်ကနေ စလုပ်ကြည့်ပါ။ အကျိုးမြန်မြန် ခံစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သုံးလေးရက်လုပ်ပါ။
တစ်ခုတော့ ကြိုပြောထားပါ့မယ်။ မနိုင်ဝန် မထမ်းပါနဲ့။
ကိုယျခန်ဓာ တောငျ့တငျးလှပစဖေို့ ဘယျလောကျကွာကွာ လကေ့ငျြ့ရမလဲ
လကေ့ငျြ့ခနျး ဘယျလောကျမြားမြား လုပျသငျ့ပါသလဲ?? လူတျောတျောတျောမြားမြားဟာ ကာယလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျဖို့ အခြိနျကို ဝခှေဲမရတတျပါဘူး။ တဈပါတျငါးရကျလား? လေးရကျလုပျရမှာလား?? နှဈရကျဆို လုံလောကျပွီလား??
ကြှနျတျောတို့ ကိုယျကာယ ပညာရှငျတဈယောကျကို မေးကွညျ့ပါတယျ။ သူပွောတာက တဈပါတျမှာ နှဈရကျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာနဲ့ သုံးရကျလုပျတာနဲ့က တျောတျောကှာပါတယျ တဲ့။ ဘာမှမလုပျတာထကျ လကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုခုလုပျတာက ပိုကောငျးတယျဆိုပမေယျ့ သငျက အစကတညျးက ကိုယျလုံးလှနပွေီးသားလူတဈယောကျဆိုရငျ တဈပါတျကို နှဈရကျပဲ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျတာကက အရမျးအကြိုးမဖွဈထှနျးစပေါဘူး။
တဈပါတျမှာ သုံးရကျလောကျအနညျးဆုံးတော့ သသေခြောခြာဆှဲထားတဲ့ လကေ့ငျြ့မှု အစီအစဉျနဲ့ လုပျရပါမယျ။ ပွောရရငျတော့ ကိုယျကာယ လှုပျရှားမှု တဈခုခုကိုတော့ နတေိုငျးလုပျပေးသငျပါတယျ။ ဥပမာ လမျးလြှောကျတာ၊ ပွေးတာပေါ့။ လကေ့ငျြ့ခနျးနားရကျတှမှော ဘာမှမလုပျပဲ ထိုငျနခေဲ့ရငျ အရငျရကျတှကေ သငျတို့ ပငျပငျပနျးပနျးလုပျထားတာတှအေားလုံး သငျပုနျးကသြှေားပါလိမျ့မယျ။
တဈနကေို့ တဈနာရီလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပွီး ကနျြတဲ့ အခြိနျတှေ လုံးဝ အညောငျးထိုငျနမေယျဆိုရငျ ကနျြမာရေးဆိုးကြိုးတှေ ဖွဈလာနိုငျပါသေးတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခြိနျတှမှောသာမက တခွားအခြိနျတှမှောလဲ လှုပျလှုပျရှားရှား နပေေးသငျ့ပါတယျ။
ကိုယျကာယ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာ ပွောရရငျတော့ တဈပါတျကို နှဈရကျလုပျတာနဲ့ သုံးရကျလုပျတာက အမြားကွီးကှာပါတယျ။ တဈပါတျကိုသုံးရကျလုပျရငျ အပွောငျးအလဲတှကေို စောစောစီးစီး မွငျရမှာပါ။ သုံးရကျထကျ ပိုလုပျခငျြရငျလညျး ရပါတယျ။ တဈပါတျနှဈရကျကတော့ အဲ့လောကျ အပွောငျးအလဲ ဖွဈမှာမဟုတျပါဘူး။ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးတှကေိုလဲ သိသိသာသာ ခံစားရမှာ မဟုတျပါဘူး။
အရမျးပငျပနျးတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှဆေိုရငျတော့ တဈပါတျကို နှဈကွိမျမှ ငါးကွိမျအတှငျး သငျ့ခံနိုငျရညျအားအပျေါမူတညျပွီး လုပျပေးသငျ့ပါတယျ။ အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ သငျ့ခန်ဓာကိုယျက ခံနိုငျလာပွီး တိုးတိုးပွီး လုပျနိုငျလာမှာပါ။ ကလေးတှနေဲ့ လူငယျတှေ လကေ့ငျြ့ခနျး စလုပျတာဆိုရငျတော့ နှဈရကျကနေ စလုပျကွညျ့ပါ။ အကြိုးမွနျမွနျ ခံစားခငျြတယျဆိုရငျတော့ သုံးလေးရကျလုပျပါ။
တဈခုတော့ ကွိုပွောထားပါ့မယျ။ မနိုငျဝနျ မထမျးပါနဲ့။
Previous: အဆီတိုးစေနိုင်သည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားသောက်ဖွယ်ရာများ
Next: အံ့သြမင်တက်သွားလောက်စရာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဗဟုသုတ အချက်(၂၀)